ငမိုးရိပ်ချောင်းဘေး တစ်လျှောက်တွင် အပန်းဖြေနေရာများ ဖော်ဆောင်ရန် စီစဉ်နေဟုမြို့တော်ဝန် ဆ? - Yangon Media Group
ငမိုးရိပ်ချောင်း ဘေးတစ်လျှောက် အပန်းဖြေနေရာစီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော် နိုင်ရန်အတွက် ဘဏ္ဍာငွေလျာထားကာ ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်သို့အဆို ပြုချက်တင်ပြရန် စီစဉ်နေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင် စိုးက ပြောသည်။ မတ် ၄ရက် ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ် တော်အစည်းအဝေးတွင် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) မှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနေဘုန်းလတ်၏ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ငမိုးရိပ်ချောင်းကမ်းပါး နေရာများအား အများပြည်သူအနားယူ အပန်းဖြေနိုင်သည့်နေရာများအဖြစ် စီမံဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီ အစဉ်ရှိ မရှိ မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကအထက်ပါ အတိုင်း ထည့်သွင်းဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ငမိုးရိပ်ချောင်းကမ်းပါးနယ် နိမိတ်တစ်လျှောက် စိမ်းလန်းသာယာစေရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြင်သစ်နိုင်ငံဖွံ့ ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ(င်္ဗီ)၏ အ ထောက်အပံ့ဖြင့် ဖော်ဆောင်ရန် လျာထားစီစဉ်ခဲ့သော်လည်း ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ၁၃ရက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ ယင်း စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အထောက် အပံ့ချေးငွေရယူရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှ သဘောတူညီမှုမရခဲ့ သောကြောင့် စီမံကိန်းဖော်ဆောင်နိုင် ခြင်းမရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန် မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးက ပြောသည်။
”အဆိုပါစီမံကိန်းနဲ့စပ်လျဉ်း ၍ လက်ရှိအခြေအနေတွင်မြေပြင်ကွင်းဆင်းစိစစ်ခြင်းများ၊ ဆွေးနွေးညှိ နှိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင ရွက်ခြင်းများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဆဲအခြေအနေတွင်ရှိပြီး အဆိုပါစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လည်း ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ ဘဏ္ဍာ ငွေလျာထား၍ အဆိုပြုတင်ပြအတည်ပြုချက် ရယူဆောင်ရွက်နိုင် ရေးကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
အိမ်များကို မြစ်ချောင်းများဘက်သို့ မျက်နှာမူတည်ဆောက်ရမည့် အစားအိမ်သာများတည်ဆောက်ထားမှုသည် အမြင်မတင့်တယ် သည့်အပြင် မြစ်ချောင်းညစ်ညမ်းစေ ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပညာပေး ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်သလို ငမိုးရိပ်ချောင်းသာမက အင်းလျားကန်နှင့် ကန်တော်ကြီးတို့၏ ကမ်းစပ်နားရှိဆိုင်များကို နောက်ဆုတ်ခိုင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန် မြို့တော်ဝန်က ပြောသည်။ ခုံးကျော်တံတားများနှင့် မြစ်ကူးတံတားများအောက်ရှိ လွတ် သွားသောနေရာများအား Community Center အဖြစ် စီစဉ်ပေး နေကြောင်း သိရသည်။ လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် စိမ်းလန်းမြေဧရိယာမှာ ၅ဒသမ ဝ၂ စတုရန်းပေဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
မြေယာလျော်ကြေးပေးရာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြေတိုင်းပေါင်းပြီး အမှန်ရှိ ဧကထက် စာရင်းပ?
‘စာအုပ်ညဈေးပွဲတော်’ကို စတင်ဖွင့်လှစ်၊ အမြဲတမ်းစာအုပ်တန်းတစ်တန်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် တိုင်း
ထိုင်းနိုင်ငံသား ခရီးသွားများ မော်တော်ယာဉ်များ၊ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လည
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်တွင် ဂျိုဗစ်၏ခြေစွမ်း ပိုကောင်းလာမည်ဟု မာဂတ် သုံးသပ်